Kedu nri ndị dị na phosphates? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Phosphates na nri - esi edozi
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa akụrụ, ị nwere ike ịmaraworị na ị kwesịrị ịchọ phosphorus na nri gị iji zere nsogbu dịka ọrịa obi ma ọ bụ adịghị ike ma na-agbaji ọkpụkpụ. Isiokwu a kọwara mmekọrịta dị n’etiti site na ọrịa akụrụ ma nye gị ndụmọdụ banyere etu ị ga-esi merie ya vchọgharị ụlọ ahịa na - eri nri ala - nwere ike na - eyi gị egwu, mana ọ na - ewe usoro ịzụ ahịa ziri ezi.
Ya mere, ka anyị gwuo obere egwuregwu. .. (egwuregwu gosipụtara egwu) (ịkụ aka) Onye ọ bụla nwere ọrịa akụrụ nwere nri dị iche iche dabere na mkpa anụ ahụ ha, mana enwere igodo ole na ole maka ịga nke ọma.
Zụlite ndepụta nke ụdị nri na nri ndị dị ala na mmiri dị ala ma debe ndị a mgbe ị na-azụ ahịa. Onye na-edozi ahụ gị nwere ike inyere gị aka ijikọ ọnụ. Mara Lisa, o nwere oria akụrụ na choro iku ume.
Ọ ga-agwa anyị otu esi ahọrọ nri kwesịrị ekwesị iji jigide nri nri site na phosphorus.- I meela na enwere m obi ụtọ ịbụ.- Okay Lisa, ajụjụ mbụ.
ụmụaka igwe kwụ otu ebe
Ọ bụrụ na m họrọ akụkụ akwukwo nri maka nri abalị n'abalị a, m ga-ahọrọ m ịhọrọ asparagus ma ọ bụ poteto? - Asparagus.- Nri. Poteto dị na phosphorus na potassium, yabụ ị kwesịrị izere ha.
Ajụjụ ọzọ. Ndi mmadu nwere oria akụrụ kwesiri inwe mmiri ara ehi di elu? - Ee e- Nke ahụ ziri ezi.
Mmiri ara ehi mebere atọ Iyi egwu akụrụ ọrịa n'ihi na ha bụ ọgaranya site, potassium na calcium. Ajụjụ ikpeazụ, Lisa, ya na marble niile, kedu nke n’ime ha anaghị agbakwunye site na ya? (egwu dị egwu) - Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha, ha niile bụ site. - Nke ahụ dị mma.
Mgbe ị na-agụ akwụkwọ nri na-edozi ahụ, a naghị akpọ phosphorus dị larịị. Ihe niile, gụnyere 'Phos', nwere ike gbakwunye site na ahụ mmadụ na-etinye. I merie - emeri m? Enwetụbeghị m mmeri ọ bụla gbanwere ndụ m! - Chọpụta, Lisa, ọ dị mma. (Horn music) rolọ nri nri nwere ike na-atụ ụjọ ma ọ bụrụ na ị na-eri nri.
Jee jee ije, aga m egosi gị ụfọdụ ndụmọdụ na aghụghọ n ebe ị ga-ahụ nri na-atọ ụtọ akụrụ. Chọpụta ụdị nri ị nwere ike iri ma ọ bụ enweghị ike iri nwere ike iyi oke, mana enwere m ndụmọdụ ole na ole maka gị. - Oh mba. - ọ bụ ya? - Derrick, jidere mop Dị ka usoro isi aka, nri ọhụrụ dị mma.
Zere nri esichara ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, dịka a na-etinyekwu site na ha. A gbanwere nri ndị edozila n'ụzọ ụfọdụ n'oge nkwadebe na ị ga-ahụkarị nri ndị a na akpa ma ọ bụ I nwere ike ịhụ igbe igbe, dị ka ọka, nri oyi, na anụ kpụkọrọ akpụkọ. Nri ndị edozi esiri na abụba, shuga na nnu dị elu, yabụ belata ma ọ bụ zere nri ndị a.
I kwesiri iwelata oge ị nọrọ na etiti ụlọ ahịa. amachi ebe ị gha ahu otutu nri esichara ebe a. Ọ dabara nke ọma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile nwere akara nri na-edozi ahụ.
Ka anyị lee anya ebe a
Ekwesighi site na nri, mana inwere ike ichota phosphorus agbakwunyere na akwukwo nri nri, nri ndi agbakwunyere agbakwunye na uzo mbu nke ihe ndi ozo, ma obu ndi ozo nwere uzo abuo ma obu karia. gbakwunyere. Otutu n’ime ya n’ebe a juputara na phosphorus. Nri nri, nri oyi na anụ kpụkọrọ akpụkọ.
Ana m agwa ndị mmadụ mgbe niile ka ha nọrọ ọtụtụ oge na ngalaba mkpụrụ osisi na akwukwo nri na-enweta mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ ndị dị ala na phosphorus. Debe oge ị na-etinye na etiti mpaghara nke ụlọ ahịa ahụ. Nke a bụ mpaghara dị egwu maka ndị ọrịa akụrụ.
Ingchọta nri ndị kwesịrị ekwesị iji nyere aka mee ka ọkwa phosphorus dị mma nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Gwa onye na-edozi ahụ gị nri ma gwa ha ka ha nyere gị aka mepụta atụmatụ nri ahaziri iche. (Egwu obi ụtọ)
Ndi phosphates na nri ha adighi nma nye gi?
Sitedị naeluego na proteinnridị ka mmiri ara ehi na mmiri ara ehi na anụ na ụzọ ndị ọzọ, dị ka agwa, lentil na akụ. Mkpụrụ, karịsịa ọka zuru oke na-enyesite. A na-ahụ Phosporus n'obere ntakịrị naakwụkwọ nrina mkpụrụ osisi.Ọkt 25 2018
Na ụbọchị, mgbe ụfọdụ awa, achịcha na-akpụzi, apụl Mpekere atụgharị aja aja na nje na-amụba na Mayonezi. Ma enwere ike ịchọta nri ndị a niile na nnukwu ụlọ ahịa, na-atụ anya na enweghị ekele maka ndị nchekwa. Mana kedu ihe bụ ihe nchekwa, olee otu ha si enyere aka idobe nri ndị a na-eri ma ọ dị mma? E nwere isi ihe abụọ na - eme ka nri mebie: microbes na oxidation .Microbes dị ka nje na fungi na-awakpo nri ma na-eri nri na nri ya, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ibute ọrịa dịka listeria na botulism.
Ndị ọzọ na-eme ka nri a na-eri ghọọ ihe na-esi ísì ụtọ, nke na-adịchaghị mma, ma dị mma. Ka ọ dị ugbu a, ọxịdashọn bụ mgbanwe kemịkalụ na mkpụrụ ndụ ihe oriri site na enzymes ma ọ bụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla na-eme abụba rancid na ngwaahịa aja aja dịka apụl na poteto. Ndị nchekwa nwere ike igbochi ụdị mmebi abụọ ahụ.
Tupu e mepụta ihe jụrụ ajụ, ero, nje na-ejupụta na nri. Ya mere, anyị chepụtara ụzọ iji mepụta gburugburu ebe obibi na-adịghị mma maka ụmụ nje. More acidic oriri untangle enzymes na ụmụ nje kwesịrị ịdị ndụ.
Fọdụ ụdị nje nwere ike inyere aka. Kemgbe ọtụtụ puku afọ, ụmụ mmadụ echekwala nri nwere nje bacteria na-emepụta acid lactic. Acid ahụ na-eme ka inine na mmiri ara ehi na-emebi emebi ghọọ nri na-adịte aka, dị ka sauerkraut na Europe, kimchi na Korea, na yogọt na Middle East.
Nri ndị a zụlitere na-ejikwa ụmụ nje ndị bara uru mejupụta akụkụ nri gị. Ọtụtụ ihe nchekwa sịntetik bụkwa asịd. Benzoic acid dị na mgbakwasa salad, sorbic acid na chiiz na propionic acid na ngwaahịa esi.
O doro gị anya? Studiesfọdụ ọmụmụ na-egosi na benzoates, nke metụtara benzoic acid, na-enye aka na omume hyperactive, mana nsonaazụ ya enweghị isi. Ma ọ bụghị ya, asịd ndị a dị ka nchekwa zuru oke. Usoro ọzọ nke iji ọgwụ nje eme ihe bụ ịgbakwunye ọtụtụ shuga, dị ka ọ dị na Jam, ma ọ bụ nnu, dị ka ọ dị na anụ nnu.
Sugar na nnu na - ejigide ụmụ nje ji achọ mmiri na - amịpụta mmiri mmiri si na mkpụrụ ndụ ọ bụla, na - ebibi ha, oke shuga na nnu nwere ike ibute ọrịa gị, ọrịa shuga, na ọbara mgbali elu, yabụ ndị nchekwa ndị a kachasị mma. Antimicrobial nitrates na nitrites, ndị a na-ahụkarị na charcuterie, na-alụ ọgụ megide nje na-akpata botulism, mana ha nwere ike ịkpata nsogbu ahụike ọzọ. Studiesfọdụ ọmụmụ na-ejikọ ngwaahịa soseji na ọrịa kansa egosila na ndị nchekwa a nwere ike ịbụ ndị kpatara ya.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-egbochi antioxidant na-egbochi mgbanwe kemịkal nke nwere ike inye nri nri ma ọ bụ agba adịghị mma. Fọdụ n'ime ihe ndị na-esi ísì ụtọ dị n'anwụrụ ọkụ bụ antioxidants. Ijikọta ise siga na nnu bụ ụzọ dị irè iji chekwaa anụ tupu friji.
Maka mmetụta antioxidant na-enweghị anwụrụ ọkụ, e nwere ogige dị ka BHT na tocopherol, nke a maara dị ka vitamin E. Dị ka ogige ndị dị na anwụrụ ọkụ, ndị a na-ekpuchi ihe na-enweghị ihe ọ bụla na-egbochi flacid flavors nke nwere ike ịmalite na nri dị ka mmanụ, cheese, na ọka. Antioxidants ndị ọzọ dị ka citric acid na ascorbic acid na-enyere aka belata ngwaahịa iji chekwaa agba ha site na igbochi enzyme nke na-akpata nchara nchara.
ọka ọ forụ maka ndị na-eme egwuregwu
Somefọdụ ogige dị ka sulfites nwere ike ịba ụba. Ha abụrụ antimicrobial na antioxidant. Yabụ ị kwesiri ichegbu onwe gị gbasara nchekwa? Ọfọn, ha na-anọkarị na ala nke ndepụta ihe ndị a na-eji ha eme ihe dị obere nke FDA.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ na-anwa ịchọta ụzọ ndị ọzọ. otu esi belata ikuku oxygen gburugburu nri nwere ike inye aka, mana na-enweghị enyemaka kemịkal, enwere nri ole na ole ga-adịru ogologo oge.
Kedu ihe bụ phosphates na gịnị kpatara ha ji adị njọ?
Dị ka nkịtị, dị elu nkephosphatenwere ike ibuli ọnụọgụ ọnwụ maka ọha na eze, yana ndị nwere ọrịa akụrụ na ọrịa obi. Ndị nchọpụta jikọtara eluphosphateọkwa iji mee ka ịka nká na mmebi ahụ mebie.Ọkt 19 2018
Kedu ihe bụ phosphates dị mma?
Site n'inwe nnukwu ọkwa nkesiten'ime ọbara gị, ị nwere ike ịmepụta mkpokọ calcium na ime ka akwara na-esi ike n'ime obi, ”ka Brissette na-akọwa. Ọzọ ọmụmụ na ụmụ anụmanụ nwere kegide elu etoju nkephosphateoriri iji banye n'ihe ize ndụ dị elu nke ọbara mgbali elu na ọbụna ibi ndụ ịnọ otu ebe.21bọchị 21 2019
Unere dị elu na phosphate?
Uneredị nnọọeluna potassium. Otuunerenwere 422mg nke potassium. Otú ọ dị, ndị ọrịa na-arịa ọrịa mamịrị nwere ike inwenke ka eluọtụtụ potassium. Ndị a abụghị naanịelu na site, kamakwa ọ bụeluna potassium.Eprel 26 2017
Ndi phosphates n’eri chlorine?
Phosphates na-eri nriihechlorine, na ala ka mbachlorinena-eduga na uto nke algae. Naanị mesoo mgbe achọrọ. Ngwa Phoenix: “Igwe ojii ga - erukwa n’elu mgbakwunye ma nwekwaa nrụgide nzacha, yabụ ịghasa na / ma ọ bụ hichaa nzacha ahụ dịka ọ dị mkpa. Nyochaaphosphaten'usoro ma jiri ya mee ihe n'ụzọ kwekọrọ na ya. ”Ọgọst 23 2018
Kọfị ọ dị elu na phosphate?
Site, sodium, kalori, carbohydrates na protein pere mpe na nwakọfịọ bụghịkwa maka iji ihe oriri na-edozi ahụ.25bọchị 25 2021
na-arụzi igwe kwụ otu ebe n'akụkụ m
Ndi akwa di na elu site na?
Akwabụ nnukwu protein ma nweekwa 95 mgsitena nnukwuakwa. Wepu nkochi ime akwa nasitebụ naanị 5 mg maka nke ọ bụlaakwaacha ọcha.
Ndi phosphates adighi nma maka odo odo gi?
Eluphosphateọkwa nwere ike imetụtanke giahụike ma ọ bụrụ na ọ dị oke elu. Karịsịa, ọ ga-emetụta otu esi ejikwa gịọdọ mmiri gị. Eluphosphateogo na-eri algae ma na-akwalite uto algae, nke na-eme ka o sie ike ma di oke onuihealgae ma debeọdọ mmiri gịonwu edozi.
Kedu nri ndị ị kwesịrị ịma banyere phosphates?
Tupu ịmalite ịtụ ụjọ, n'agbanyeghị, nke a bụ ihe ndị ọkachamara n'ihe banyere nri chọrọ ka ị mara maka phosphates. Kedu ihe bụ phosphates, kpọmkwem? Ighachite azụ maka nke abụọ: Phosphorus bụ ịnweta nke a na-ahụkarị na nri bara ụba na protein gụnyere mmiri ara ehi, azụ, anụ, na akwa - ahụ gị chọrọ ya iji nyere aka akụrụ, ọkpụkpụ, na akwara gị ịrụ ọrụ nke ọma.
Kedu nri ị ga-ezere ma ọ bụrụ na ị nwere phosphorus dị elu na nri gị?
N'ọtụtụ ọnọdụ enwere nhọrọ site na nri dị elu site na nri. Mgbe ị na-egbochi phosphorus na nri, oke oke dị mkpa. Akụrụngwa dịka ndepụta nri, ndepụta nri na usoro nri ndị na-edozi ahụ nyere gị aka ịmụ banyere njikwa site na nri.
Kedu nri ị chọrọ iji belata phosphorus n'ime ọbara gị?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwetulata phosphorus dị na sistemụ gị n’ihi ọnọdụ akụrụ, bido n’inwelata nri ndị esiri esi nri. Ọbara gị na-amịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ phosphorus agbakwunyere na nri ndị edozi. Only na-amata ihe dịka 20% -50% nke site na nri dị ka anụ na agwa.